बैदेशिक रोजगार : खानपिनमा भन्दा फोनमा खर्च भरमार ! - inaruwaonline.com
बैदेशिक रोजगार : खानपिनमा भन्दा फोनमा खर्च भरमार !
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २०, २०७२ समय: ९:२६:२५
मंसिर २०, गुल्मी, प्रेम सुनार। गुल्मी बडागाउँका रामबहादुर बिश्वकर्माले मोवाईलमा मासिक ३ हजार सम्म खर्च गर्छन । उनकी श्रीमतीले करिव ५ सय खर्च गर्छिन् । छोरीको झण्डै एक हजार , जेठो छोराले पनि त्यत्तिनै खर्च गर्छन । यहाँ सम्मकी गत तिन महिना देखि मोवाईल खेलाउन थालेका उनका १३ वर्षिय छोराले पनि सरदर मासिक ५ सय खर्च गर्न थाले पछि त्यो घरमा मोवाईलमा मात्र मासिक खर्च सरदर ६ हजार रहेको छ ।
तर उनिहरुको मासिक खर्च अन्न घर मै हुने भएकोले अन्य खाना लगाउन खर्च मोवाईलको फोन खर्च भन्दा कम देखिएको छ । आम्दानीको श्रोत हो वैदेशिक रोजगार । बिश्वकर्मा बैदेशिक रोजगारका लागि कतार जान थाले पछि त्यो घरको फोन खर्च बढेको हो । विदेशबाट परिवारका सवै सदस्यहरुलाई फोन ल्याई दिए पछि त्यो घरमा सवै गरेर ५० हजार भन्दा बढि मुल्यका मोवाईलहरु रहेका छन ।
तर वावु आमाले जोरेर दिएको वाहेक श्रीमति छोरीहरुका लागि २५ हजार मुल्य बरावरको सुन चाँदी समेत आफुले जोर्न नसकेका उनि बताउछन् । उनले भने –‘आउदा यस्तो मोवाईल उस्तो मोवाईल मात्रै ल्याई देउ भन्छन त्यस्तो सुन चाँदीको गरगहनामा चासो नै छैन् त्यसेले तिनै मोवाईलका थोत्रा मात्रै छन सुन चाँदी जोरिएको छैन् ।’
यता घरदेशी र उता प्रदेशी त्यस्ता कतिपय जोडीहरुले भिडियो कल र कतिपयले फोन कुराकानीकै माध्यमबाट यौन प्यास मेटाउने गरेको समेत पाईएको छ । यसले गर्दा पनि बैदेशिक रोजगारले खान खर्च भन्दा मोवाईल फोन खर्च बढाएको देखिन्छ ।इबाग्लुगं बाट